Ny toro-hevitry ny mpamadika – Tsodrano
Ny toro-hevitry ny mpamadika
Perikopa alahady 18 aogositra 2013
Jeremia 38 : 4 – 10
Nirahin’Andriamanitra hanatanteraka asa sarotra Jeremia tao amin’ny tany sy fotoana tsy nisin’ny fandriampahalemana. Jodia sy Israely dia efa toa ambavahoan’ny fahafatesana ny mponina ao.
Sedekia, dia mpanjaka napetrak’i Nabokadonozoro hitondra an’i Jodia. Ary niantso an’i Jeremia hilaza aminy ny ho avin’ny tany sy ny fanjakana. Rehefa nilaza izany tokoa Jeremia dia tsy te hahalala i Sedekia fa nanao arak’izay heveriny hatao.
Manarak’izay dia nofitahin’ireo manam-boninahitra izy noho ireo tsy nahazaka ny tenin’i Jeremia. Marina fa tsy zavatra mahafaly no voalaza fa fiavin’ny loza atsy ho atsy. Loza satria hananika ny tany ny fahavalo. Noho izany dia hisy ady. Ary io dia mitondra fikorosohana ho an’ny firenena indrindra izay resy. Satria tsy maintsy mihohoka eo anatrehan’ny mpandresy.
Eny, tsy nahafaly ny manam-boninahitra miaramila tao an-dapa ny tenin’i Jeremia. Akaiky ny fahefana, akaiky ny mpanjaka Sedekia izy ireo, ary nanapatra ny fahefany ao amin’ny fitondrana.
Naniry ny hahafatesan’i Jeremia aza izy ireo. Izay no toro-hevitra nomeny ny mpanjaka. Raha manaiky io mantsy ny mpanjaka dia tsy izy ireo intsony no tompon’andraikitra amin’ny fahafatesan’i Jeremia satria tsy izy no mpanatanteraka ny baiko farany. Afa-maina izany izy ireo amin’ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka. Izany no atao hoe : mitady ranondranony tamin’ny mpanjaka.
Fa inona no teny nataon’i Jeremia ka tsy nahafaly ny manam-boninahitra ? Tsotra . izao no lazainy « and . 2 : Izao no lazain’ny TOMPO : Izay mijanona eto amin’ity tanàna ity dia ho fatin’ny ady sy ny mosary ary ny areti-mandringana. Fa izay mivoaka ny tanàna mba hitolo-batana amin’ny Babiloniana kosa dia ho velona hahavonjy ny ainy » ary ny and. 3 : Hatolotra eo an-tananan’ny Babiloniana tokoa ity tanàna ity ka ho azony . »
Ary dia nafototry ny manam-boninahitra tamin’i Jeremia izany teny izany. Nolazain’izy ireo fa fanakivina ny miaramila sy ny vahoaka izany. Marina fa tsy teny mitondra fampaherezana tokoa. Kanefa raha mijery ny tantara dia hita fa tsy haharesy ireo fahavalo akory ny fitambaran’i Jodia sy Israely. Noho izany mba tsy hahafatesan’ny vahoaka sy hiharan’ny fijaliana dia tsy maintsy mitady ny lalana hialana amin’izany. Ka io no anisan’ny anankiray voalohany. Ary raha ho lasa any am-pahababoana aza ny vahoaka dia fara-faharatsiny velon’aina izy ireo.
Ny mpanjaka moa dia nanaiky ny fangatahan’ny manam-boninahitra. Nisambotra i Jeremia ary nanatsipy azy tao anaty lavaka izay feno fotaka mandrevo .Noheverin’izy ireo fa rehefa ao i Jeremia dia miverina amin’ny laoniny ny zavatra rehetra. Kanefa tsy izany no nitranga.
Tsy mahazo manafina ny teny nampitondraina izy fa tsy maintsy milaza ny marina.
Na dia voagadra aza izy dia indro nisy mpanompo Etiopiana iray izay niasa tao an-dapa niresaka tamin’ny mpanjaka. Nilaza izy fa tsy mety izao nataon’ny manam-boninahitra izao. Fanapahan-kevitra ratsy izao hoy izy. Ary mangataka ny hamoahana an’i Jeremia ao an-davaka izy. Satria ho faty ao io lehilahy io noho ny tsy fisian-kanina intsony.
Asa na natahotra ny mpanjaka ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesan’i Jeremia ka namoaka azy.
Raha jerena amin’ny tantaran’ny firenena maro eto amin’izao tontolo izao ity perikopa ity dia tsy vaovao.
Impiry ny toe-zavatra tahaka izao no efa niseho ary nahatsiravina ny fiafaran’ny tantara.
Ny fitiavana fahefana tafahoatra dia ahitan-doza. Eny fa na dia hitany aza ny fahaverezan’ny firenena vokatr’izany dia tsy ahoany.
Eto koa ny hahitana olom-pahefana amin’ny am-baratonga samihafa samy tia voninahitra no tsy matotra. Dia ireo izay manoro vohona ny mpitondra. Firifiry moa no voafitaka. Na tsy manana hazondamosina na matahotra ny halan’ny hafa eo amin’ny fitondrana ka tsy mieriteritra. Ao anatin’izany koa ny fanerena avy any ivelany.
Maro ny firenena tokony handroso lavitra dia lavitra tokoa saingy ireo mpanoro-hevitra dia manao izay tiany. Tsy manaiky ny hanarina ny firenena fa ny hamono aza no ataony. Marina fa ho lasa babo tamin’ny andron’i Jeremia ny vahoaka fa saingy raha velona ny olona dia mbola manana fanantenana ho velona sy afaka ary hanarina ny firenena.
Misy koa olona izay mifanohitra amin’ny voalaza teo aloha. Mifandray amin’ny fahefana tampony ary afaka mihevitra izay marina sy manao soa toa ilay Etiopiana. Tsy ny olona rehetra no ratsy fa misy tokoa ny afaka mijoro amin’ny marina fa saingy tsy henoina izy satria heverina ho mpanompo. Ny mpanjaka dia nihaino azy ihany. Fa raha amin’izao fotoana izao dia ny mifanohitra amin’izany no mitranga. Ity tantara ity dia mampiseho fa tena tia ny fireneny ve ireto manam-boninahitra ireto ? Ny mpanjaka toa marivo salosana ? Tsy manana hazon-damosina fa miovaova saina matetika. Lava dia lava ity tantara ity ary ratsy fiafara.
Tsy vitan’ny ady amin’ny famonoana olona no mitranga fa ady amin’ny fampisavorovorona ny sain’ny vahoaka amin’ny filazam-baovao. Ny mpitondra tsy afaka maneho ny heviny fa toa entin’ny sasany amin’ny sangany. Tsy fantany akory izay ataony. Fa dia matahotra. Inona no niafarany ? Firenena maro no mikorontana noho ny tsy fiara-mihevitra ny ho avy ao amin’ny mpitondra fa samy maka ho azy ary mifanenjika. Ny fialonana moa tsy lazaina intsony.
Izay angamba no mahatonga ny tenin’i Jesosy hoe : Na dia ao amin’ny fianakaviana aza dia hisy fisarahana : ny ray hanohitra ny zanany, ny zanany hanohitra ny rainy, ny reniny hanohitra ny zanany vavy. Io koa hanohitra ny reniny. Ary tahaka izany ny vinanto sy ny avy amin’ny rohim-pihavanana .
Raha tsy resy izany rehetra izany na tamin’ny andron’i Sedekia, na ankehitriny dia tsy mbola vonona ho amin’ny fandriampahalemana ny olona. No tsy te-halala izany fitiavan’Andriamanitra izany. Satria mitarika azy ho amin’ny tsara sy ny fandrosoana izany. Saingy misy ny te-hijanona eo amin’ny fanitsahana sy fandringanana ny hafa. Ary tsy izay ny fampianaran’i Jesosy Kristy. Amena.
ady, aret-mandringana, fahefana, fampaherezana, fanantenana, fandringanana, fandrosoana, fanerena, fanitsahana, fanjakana, fazon-damosina, firenena, manam-boninahitra, matahotra, miaramila, mosary, mpandresy, ratsy, resy, tany, tsara, vahoaka
Mahavariana ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fitsarany
MON VILLAGE (AMBOHIMANARINA)
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois mai 2021 (2) avril 2021 (1) février 2021 (1) janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)